“ဒါဖတ်ပြီးမှ အတင်းပြောပါ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ဒါဖတ်ပြီးမှ အတင်းပြောပါ”
Posted by black chaw on Oct 30, 2011 in Creative Writing | 21 comments
နံနက်ခင်းတစ်ခုတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘလက် နှင့် သူငယ်ချင်းတစ်စုသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာတိုက်ဝန်းအတွင်းရှိ အသည်းပန်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင် တွင် ထိုင်လျက် နံနက်စာဘရိတ်ဖတ်ကို သုံးဆောင် နေကြခိုက်လည်းဖြစ်ပါ၏။ ဘလက် တို့ သူငယ်ချင်းများမှာ ထိုအချိန်က ဘောလုံးပွဲလောင်း ကစားခြင်း ကို နှစ်ခြိုက်စွာ ပြုလုပ်လျက် ရှိသော အချိန်ကာလများဖြစ်ပါသည်။ နံနက်စာ စားလျက်ရှိသော ဘလက်တို့တစ်စုတွင် ဘောလုံးဒိုင်တစ် ယောက်ဖြစ်သည့် ကိုကျော်ဆိုသူလည်းပါဝင်ပါ၏။ ကျန်သူများကား ကိုကျော့်ထံတွင့် ဘောလုံးပွဲလောင်းသော သူများသာဖြစ်ပါ၏။ ကိုကျော်သည် လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းကို ဦးဆောင်လျက် ညကကန်သော ဘောလုံးပွဲအကြောင်းကို မြိန်ရေယှက်ရေကြီး ပြန်ပြောပြနေစဉ်မှာ ပင် ၄င်း၏ဟန်းဖုန်းမှ ဖုန်းမြည်သံကိုကြားလိုက်ရပါ၏။ ကိုကျော်က ပြောလက်စ စကားကို ရပ်၍ ဖုန်း ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီး မောင်မောင့် ဆီကဖုန်း ဟုပြောလိုက်ပြီး ဖုန်းပြန်ဖြေခြင်းအမှုကိုပြုပါလေ၏။
“ မောင်မောင် ပြောပါ “
ဟိုဘက်က ဘာပြန်ပြောသည် မသိပါ။ ကိုကျော်က ထပ်ပြောပါသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်နေပြီ။ ခင်ဗျား ပေးရမယ့် စာရင်းက သုံးပုံးခွဲတိတိပဲ “
ဟိုဘက်က ဘာပြန်ပြောသည်မသိပါ။ ကိုကျော်က ထပ်ပြောပြန်ပါသည်။
“ ရပါတယ်ဗျာ။ စောင့်ဆိုတော့လည်း စောင့်ရမှာပေါ့။ အိုကေပါဗျာ”
ကိုကျော်က ဖုန်းကို စားပွဲပေါ်သို့ ပစ်တင်လိုက်ပြီး
“မောင်မောင်ဆိုတဲ့ လူဗျာ သူပေးစရာရှိတော့ နှစ်ရက်လောက်ဆိုင်းပေးပါတဲ့။ သူရစရာရှိတော့ ချက်ခြင်းလိုချင်တယ်။ ခက်တယ်ဗျာ ဘောလုံးပွဲ ဒိုင်ကိုင်ရတာ။ “ ဟု ညည်းပြောပြောပါသည်။ ကျွန်တော်က
“ အဲဒီလူက အရင်ရှုံးတုန်းကလည်း ချက်ခြင်းပေးတာပဲဗျ။ အခု ငွေ နည်းနည်းကျပ်နေလို့လားမှ မသိတာ “
ဟု ဖြေပြောလေး ၀င်ပြောပေးလိုက်ပါသည်။ ထိုအခါမှ ကိုကျော်က မောင်မောင့် အကြောင်းစုံကို ရင်ဖွင့် ပါလေတော့သည်။
“ အရင်က ချက်ခြင်းပေးတာ ဟုတ်တယ်ဗျ။ အခု ဒီလူ ကားတောင်ရောင်းလိုက်ရတယ်ပြောတယ်။ စီးပွားရေးလည်း သိတ်ကောင်းတဲ့ ပုံမပေါ်ဘူး။ သူနေတဲ့ အိမ်ကလည်း ငှားထားတာလို့ ပြောတယ်။ အထင်ကြီးမနေနဲ့ အထည်ကြီးပျက်ပါဗျာ”။
ထိုအခိုက် ကျွန်တော့် ဟန်းဖုန်းမှ ဖုန်းမြည်သံကြားလိုက်ရပါသည်။ ခေါ်သူကို ကြည့်လိုက်တော့ ခုနက ကိုကျော့်ကို ဖုန်းခေါ်ခဲ့သော မောင်မောင် ဖြစ်နေပါ၏။ ထို့ကြောင့် ကိုကျော်အား
“ မောင်မောင့်ဆီက ဖုန်းဗျ ခဏလေး “ ဟု စကားကို ရပ်ရန် သတိပေးရင်း ဖုန်းကိုလက်ခံလိုက်ပါသည်။
တစ်ဖက်မှ မောင်မောင်က ဒေါသအလွန်ထွက်နေသော အသံဖြင့်
“ကိုဘလက်ရေ၊ ကိုကျော်ဆိုတဲ့လူကို ပြောလိုက်စမ်းပါဗျာ၊ သူများအတင်းပြောရင်လည်း ဖုန်းလေးဘာလေး ပိတ်ပြီးမှ ပြောပါလို့၊
ဖုန်းမပိတ်ပဲ အတင်းပြောနေတော့ ဒီဘက်က အကုန်ကြားနေရတယ်လို့၊ ဒါပါပဲဗျာ” ဟုဆိုကာ ဖုန်းကို ချသွားပါသည်။
ကိုကျော်က “ ဘာတဲ့လဲဗျ “ ဟု ကျွန်တော့်ကို မေးပါသည်။ ကျွန်တော်က
“ ခင်ဗျားက ဖုန်းမပိတ်ပဲ သူ့အကြောင်းတွေ ပြောနေတော့ မောင်မောင် တော်တော် ဒေါသထွက်နေတယ်” ဟု ပြန်ပြောပြပါသည်။
ထိုအခါကျတော့မှ ကိုကျော်တစ်ယောက် “ ဟာဟုတ်သားပဲ၊ ကျွန်တော် ဖုန်းမပိတ်လိုက်မိဘူးဗျာ၊ အားနာစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ” ဟု ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ဖြစ်နေပါတော့သည်။
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်စု ကိုကျော့် အဖြစ်ကိုကြည့်၍ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မိကြပါသည်။ ကိုကျော်လည်း ရှက်ကိုး ရှက်ကန်းဖြင့် မောင်မောင့်ထံ ဖုန်းပြန်ခေါ်၍
ထိုနေ့မှစ၍ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းများကြားတွင် တစ်စုံတစ်ယောက်အကြောင်း ကွယ်ရာတွင်ပြောမိပါက ဖုန်း ပိတ်ထားရဲ့လား ဟု
အပျော်သဘော သတိပေးတတ်ကြပါသည်။ တကယ့်အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပါသည်။
ရွာသူရွာသားများလည်း တစုံတယောက်နှင့် ဖုန်းပြောပြီးပါက ဖုန်းပိတ်ပြီးမှ အတင်းပြောကြပါ ဟု ရင်းရင်းနှီးနှီး သတိပေးပါရစေဗျာ။
(အပျော်သဘောနဲ့ပြောတာပါဗျာ။ ရွာသူရွာသားတွေထဲမှာ အတင်းပြောတတ်တဲ့ လူ မရှိလောက်ပါဘူး နော…..။)
ဒါကြောင့် ရှေ့လူကြီးတွေ ပြောတဲ့စကား တကယ်မှန်တယ်ဆိုတာလေ… ရှေ့ပြော နောက်ကြည့်ဆိုတာလေ။ ရှေ့မှာ စွတ်တင်နေပြီးပြောခံရတဲ့သူက အနောက်မှ မချိပြုံးနဲ့ ရပ်နေတာ မမြင်ကြတာကို ဆိုလိုဟန်တူပါရဲ့ ခုခေတ်ကလည်း ရှေ့ကော ကွယ်ရာကော ပြောနေကြတာ များကြပါတယ် အကိုဘလက်ရေ… မနောဆို လူမုန်းများလို့ ပြောတာထက်ကို ချောင်းရိုက်မယ့်သူတွေတောင် ရှိနေလေရဲ့….
အနော့်ကို ဖုန်းထဲကနေ အားကိုဂျီးတစ်ယောက် က ပြောတယ်
အနော် က အနော်ဧည့်ခံ လိုက်ရတဲ့ အားကိုဂျီး တစ်ယောက်ကို ပြန်ပြောပြလိုက်မိတယ်
အဆုံးသတ်တော့ ၊ အနော့်မှာ ဝါးရင်းတုတ် ကြိမ်း ကြိမ်းခံလိုက်ရဒယ်
ဒါ နမူနာပဲ ရှိသေးတယ်။
ဆူး အဘွားတွေ ခေတ်တုန်းက အဘွားတို့နဲ့ သက်တူရွယ်တူတန်းပေါ့.. အဲဒီ အဘွားကြီး အခုထိ ရှိသေးတယ်။ ခပ်ငယ်ငယ်က ဇတ်ပွဲသွားကြည့်တာ ဖျာ မ၀ယ်ပဲ ခိုးဝင်ပြီး ဇတ်ပွဲရဲ့ အရှေ့ဆုံးမှာ ဖျာတချပ်စာ လူလျှောက်လမ်းမှာ အတင်းဖျာချပြီး ထိုင်တယ်။ အရှေ့ဆုံးတန်းက ဈေးကြီး ပေးဝယ်ထားတဲ့ လူက မလာနဲ့ ဆိုပြီး အော်ထုတ်ရင်း တယောက်နဲ့ တယောက် ဆဲကြပါလေရော ဖျာမ၀ယ်ပဲ ဆဲတာ မိုက်နားမှာ ဆဲမိလို့ ဇတ်ပွဲ တခုလုံး ဆဲတဲ့ အသံ အော်လံက ထွက်နေတာ သူကိုယ်တိုင်လည်း မသိဘူး ဇတ်ရုံထဲက မိုက်နဲ့ အော်ဆဲ သလို ဖြစ်နေလို့ ရုံပိုင်တွေ ပြေးလာပြီး ချော့မော့ပြီး ဖျာနေရာ ပေးလိုက်ရတယ်။
ဖုန်းတော့ ဖုန်းပဲ မိုက်ကရိုဖုန်း မပိတ်မိလို့..
ညီမသတင်း အစ်မကိုမ ပေးမိတာတို့ပေါ့
နောက်မ အမှတ်တရ အလွဲများ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ တင်ပေးဦးမယ်
(မှတ်ချက်-နံရံ နှင့် မဟုတ်ပါ တိုင်လောက်နဲ့ဆိုလည်း ခေါင်းကွဲပါတယ်)
ဟီး စတာ …….. ရုပ်ချောရင် စိတ်မဆိုးကြေး
ကျွန်တော်လဲ ဒီ ပို့စ် နာမည် နှင့် ပို့စ် တင်မလိုလုပ်နေတာ ။
ကျွန်တော်လဲ အဲလိုဖြစ်ဖူးလိုလေ အတင်းပြောသလို ဖြစ်သွားတာပေါ့ ။ ကျွန်တော် မိတ်ဆွေ နဲ့ တီးဆိုင်ထိုင်နေကြတုံး နေပြည်တော် ရောက်နေတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ဆီက ဖုန်းလာပါတယ် ။ ကျွန်တော့ဖုန်းကိုလာတာပါ ။ ပီးတော ၂ ယောက် တစ်ယောက် တစ်လည်ပြောပီး ချထားလိုက်ပါတယ် ။
ပီးတော့ နေပြည်တော်က မိတ်ဆွေရဲ သမီးကို ကျွန်တော်က သဘောကျနေတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောဖြစ်ကြတယ်ဗျ ။ တော်တော်များများကို ပြေဖြစ်လိုက်တာ ။ ၁၅ မိနစ်လောက်နေတော့ ကျွန်တော့ဘေးက မိတ်ဆွေဖုန်းကို ဆက်ပီး ကော်ပါလေရော်ဗျ ။ သူက စပီကာ ဖွင့်ပီးပြောတာတဲ့ ၊ ဘေးမှာလဲ သူသမီးပါရှိတယ်တဲ့ ။ သေရောဗျာ ။ ကျွန်တော့ကို တော်တော် နဲ့ မခေါ်ဘူးဗျာ ။တော်တော် တောင်းပန်ယူရတယ် ။
မှတ်ချက်။ ။ကျွန်တော့ မိဆွေများသည် ကျွန်တော့ထက် အသက် ၂၅ လောက်ကြီးပါသည်။
ဆောရီးဗျာ Resend နှိပ်ရတာများသွားတယ် ။ ကျွန်တော့ အပြစ်မှဟုပ်ပါ ၊ ကွန်နက်ရှင်အပြစ်သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။
အဓိက က သိသွားတော့လဲကောင်းတာပေါ့။
လောက မှာ ကိုမောင်မောင်လိုလူစားအများကြိးဗျ။
မထင်ဘူး။ တမင်ကြားအောင်လုပ်ပြီးမှ အရူးကွက်နင်းတာလဲဖြစ်နိုင်တာဘဲ။
ကျွန်တော် ကြုံဖူးတာတော့ ရုံးတွင်းစည်းဝေးပွဲ တခုမှာပါ။ ပြောတဲ့သူက မိုက်ကရိုဖုန်းသေးသေးလေးကို
အင်္ကျီမှာချိတ်ပြီး ပြောတာ။ စည်းဝေးခနနားချိန်မှာ ပြောတဲ့သူက အိမ်သာသွားတာ မိုက်ကရိုဖုန်းပိတ်ဖို့ 
မေ့သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ သူရှူးရှူးပေါက်တဲ့အသံက အပြင်မှာအတိုင်းသား…နောက်ဆုံးမှာ “ ဘူ ” ဆိုပီး
အီးကထု လိုက်သေးတယ်။ သူအပြင် ထွက်လာတော့ လူတွေက ပြုံးစိစိနဲ့ဝိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့။ သူကတော့
မသိ။ စည်းဝေးပြန်စမှ မိုက်ကရိုဖုန်းမပိတ်မိမှန်းသိတာ။ အဲဒီကြမှ ရှက်ရှက်နဲ့စောစောက မိုက်ကရိုဖုန်းမပိတ်မိတာ ဆောရီးပါတဲ့။ ပရိသတ်တွေက တဝါးဝါး တဟားဟားနဲ့ရီပါလေရော။
saipan moon says:
ဟီးဟီး .. အဖြစ်ကတော့ မနှစ်ကနဲ့ မတူဘူး .. အတော်ရယ်စရာကောင်းတယ်နော် …
ကျွန်မလည်းအရင်ကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ပါးစပ်ကစိတ်ထက် မြန်တယ် … တခါတစ်လေ … ပြောမိဆိုမိလိုက်တာ .. တဖက်က လူပြန်ကြားရတဲ့အခါ အားနာစရာတွေ ဖြစ်သွားတတ်တယ် … ။ နောက်ပိုင်း ကိုယ့်ပါးစပ်ကိုယ်ထိန်းတယ် … တချို့အကြောင်းရာတွေ စိတ်ထဲရှိပေမယ့် မပြောသင့်လျှင် မပြောတော့ဘူး… ။ သူငယ်ချင်းတယောက်က ပြောဖူးတယ် … ။
((အတင်းပြောတာ …နောက်ကွယ်ကနေ .. ငါ့ဖင်ကို ရှိခိုးတာ))တဲ့ .. ဟီးဟီး … တငြိုးဂျီးပဲ
ကျွန်တော် အီးဒုံး အတင်း ပြောချင်တယ် …ဟီး….
ဟို ဘဲအိုကြီးကတော့ ရပ်သိရွာသိ … ဟီးဟီး
ဖုန်း ပိတ်ပြီးမှ ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေဘူးဗျ။
ဖုန်းချပြီးမှ ဆိုတာက ပိုပြီး ကွင်းကနဲ ကွက်ကနဲ ဖြစ်မလားပဲ။
ဒါပေမယ့်စိတ်မဆိုးပါဘူး သူတို့ပြောနေတာကိုယ့်ကောင်းကြောင်းတွေဘဲဆိုတော့လဲ အဟီး
ကျမတော့ သူငယ်ချင်း သမီးရည်းစား ဖုန်းနဲ့ရန်ဖြစ်ကျရင်း ကောင်မလေးကစိတ်ဆိုးပီး စကားဆက်မပြောတော့တဲ့အချိန်မှာ ကောင်လေးက ဖုန်းမချဘဲအတင်းပြောနေသံ အတိုင်းသားကြားရလို့ ဒုတိယအကြိမ်ရန်ပွဲထပ်ဖြစ်တာကြုံဘူးတယ်။